summerholidays Archives | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Waxba sheegay in fasax ama fasaxa, arrin sida park oo biyo ah, ma waxaad u malaynaysaa? Sunshine, Jalaato, iyo qiime hoos qaar ka mid ah bogagga biyo weyn waa la karinayo kama dambaysta madadaalo inta lagu guda jiro fasaxa xagaaga! Waxaan qabanay hawsha adag ee aan ku tijaabinayno Beerta Biyoodka ee ugu Fiican…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Marka aad la kulanto raaxada, habboonaan iyo guud yaab safarka tareenka, waa in nolosha pre-tareenka laabto adag. Gaar ahaan marka aan ka hadleynay marinnada Best tareenka Yurub ee xagaaga. qaaradda A ka buuxaan wadooyinka muuqaal dabiici ah, Muuqaalo yaab leh iyo safarro cajiib ah…